Lapho ukuhlela abaqaphela nezingane, imibhangqwana abaningi abazibuza yona ngasiphi yobudala kungcono kakhulu ukuba azale ingane yabo yokuqala. Yiqiniso, uma sicabanga ngayo kusuka iphuzu Ngenxa social inhlalakahle, njengoba manje inkambiso ukwenza emazweni aseNtshonalanga, lapho umntwana kuqala ngesikhathi omama livela iminyaka kuphela emva 30. Okokuqala owesifazane umsebenzi umatasa bekuphumelele izinga elithile zezimali, futhi kuphela ke cabanga owalandela. Ngesikhathi sokukhulelwa, lo mbhangqwana ngokuvamile kakade unayo indlu, imoto kanye ne-akhawunti okuqinile yasebhange.
Le ndlela ivumela ukuba azinikele ngokuphelele ingane ngaphandle kokuba kudingeke sikhathazeke ngalokho ukuthenga iphakethe namanabukeni noma ingane ukudla. Kodwa uma unquma ngasiphi yobudala kungcono kakhulu ukuba azale ingane yabo yokuqala, ikhumbula izincomo yezokwelapha, umbono Kuthi ezahlukene. Izazi zikholelwa ukuthi ukusebenzisa inkathi engcono - iminyaka 18-25. Kulesi yobudala zokuzala uhlelo in full bloom, futhi izinkinga gynecological incane kakhulu kunaleyo abesifazane abadala. Ngakho-ke sokukhulelwa kwenzeka ngaphandle kwezinkinga futhi onomoya omnene.
Uma ungavumelani umbono wezokwelapha ukuthi, ngasiphi yobudala kungcono kakhulu ukuba azale ingane yabo yokuqala, futhi ucabanga ukuthi ungakwazi ukulinda, kufanele sinake okulandelayo. Minyaka yonke supply amaqanda incipha. Ngaphezu kwalokho, zonke izifo, ngisho esithathelwanayo, esivame viral esithinta ukubaluleka amaqanda. Yingakho engu-35 kukhona okuningi mancane amathuba okuthi ukhulelwe ngaphandle kwezinkinga, futhi nenombolo kwezisu, uphuthelwe isisu nakomama omdala okungaphezu abasha.
Kuyinto futhi akukho nje kwaqondana ukuba ncamashi 35 eminyakeni ziye zakhomba nobudala, okwathi ngemva kwalokho bonke abesifazane abakhulelwe kufanele bahlolwe i-zofuzo, impoqo ukuthi zihlolelwe kombungu kungenzeka somntwana ongakazalwa. Yiqiniso, ukuba azale engu-40 ubudala kungaba, kodwa uma ungakwazi ukukwenza ngokushesha, akukuhle uyephuza ngolunye usuku ezinjalo.
Ngakolunye uhlangothi, ukukhulelwa ngasekupheleni ngokuvamile kuba nomphumela omuhle isidumbu sowesifazane: uthwele ingane anda ukugeleza kwegazi emzimbeni, nge ekuqaleni impindiselo ukusebenza kwezitho eziningi izinhlelo. Futhi akusho isimo sibe sibi isimo kamama rejuvenates ke. Futhi ungakhohlwa ukuthi indodakazi endala okulungiselelwe eside ngokwenqondo ebeletha. Abanaso ingcindezi yabanye abazinikele lonke ukukhulelwa omama abasha ukuphoqelela imibono yabo, etshela ngasiphi yobudala kungcono kakhulu ukuba azale ingane yabo yokuqala. Kuyinto ngokuvamile usemncane kakhulu abakhulelwe bazithola ngaphandle nokuxhaswa abathandekayo ukuthi umthelela ngesimo sazo ezingokwengqondo, ngenxa yalokho, empilweni womntwana.
Yiqiniso, akukho muntu ongathi: kowesifazane lapho kungcono ukuba ingane, kumele ichaze yona ngokwayo. Othile ukuvuthwa kule kakade le-17 uyaqaphela uhlela umntwana, futhi ezinye ezingu-30 ukwazi okwamanje nilungele, uzimisele eside bukhoma bona.
Yiqiniso, kusukela iphuzu Ngenxa odokotela kanye ingqondo, isikhathi esikahle okufanele sithathwe lapho intombazane isivele ngempela ezimele, kodwa umzimba wakhe isencane ngokwanele. Ngakho uma uthola ithuba futhi babelokhu benesifiso sokuba ingane kuze kube iminyaka engu-30, musa ukumelana naso futhi uzame ukuzuza okuningi futhi wandise phambi omunye umsebenzi esiteji. Uma eside masilahle ukuhlela ukukhulelwa, kungase kube sekwephuze kakhulu.
Endometriosis - incazelo isifo (izimpawu, izimbangela, ukwelashwa i-endometriosis)
Unity Web Player - kuyini?